Sayensi Cosmology & Astrophysics
I-Cosmology ingaba luleko olulukhuni ukufumana isibambiso phezu kwayo, njengoko kuyintsimi yokufunda ngaphakathi kwe-physics echaphazela kwezinye iindawo. (Nangona, ngokwenene, ezi ntsuku kakhulu zininzi zonke iinkalo zokufunda ngaphakathi kwe-physics zithintela kwezinye iindawo.) Yintoni i-cosmology? Yintoni abantu abayifunayo (ebizwa ngokuba yi-cosmologists) ngokwenene? Yibuphi ubungqina obukhoyo bokuxhasa umsebenzi wabo?
I-Cosmology yimiyalo yesayensi efundisisa imvelaphi kunye neyokugqibela yendalo yonke.
Inxulumene kakhulu kwiinkalo ezithile zeenkwenkwezi ze-astronomy kunye ne-astrophysics, nangona ikhulu lokugqibela liye lazisa i-cosmology ngokukhawulezileyo ngokuhambelana nolwazi oluphambili oluvela kwi-physics ye-particle.
Ngamanye amazwi, sifumana ukuqonda okuthabisayo:
Ukuqonda kwethu i-cosmology yanamhlanje ivela ekudibaniseni ukuziphatha kwezakhiwo ezinkulu kwizinto zendalo (iiplanethi, iinkwenkwezi, iigalaxi, kunye namaqoqo e-galaxy) kunye nezo zakhiwo ezincinci kummandla wethu (iinqununu eziphambili).
Ukufundwa kwe-cosmology mhlawumbi yeyona ndlela yeyona ndlela yeyona ndlela endala yokuphanda ngokubaluleka kwendalo, kwaye yaqala ngembali xa umntu wasendulo ekhangele emazulwini, wabuza imibuzo elandelayo:
Safika njani apha?
Yintoni eyenzekayo esibhakabhakeni sasebusuku?
Ngaba sodwa kwindalo yonke?
Ziziphi izinto ezikhanyayo esibhakabhakeni?
Ufumana le ngcamango.
Abadala bazama ukuzama ukuchaza oku.
Iintloko phakathi kwezi ziko zentshona yezesayensi yi- physics yamagritshi asendulo , ahlakulela imodeli ebanzi yomhlaba wendalo ehlambulukileyo ngaphezu kweenkulungwane kwada kwafika ixesha likaPtolemy, apho i-cosmology ayizange iqhubekele phambili kwiminyaka emininzi , ngaphandle kweminye yeenkcukacha malunga nokukhawuleza kweengxenye ezahlukeneyo zenkqubo.
Ukuhamba phambili okulandelayo kule ndawo kwavela kuNicolaus Copernicus ngowe-1543, xa epapasha incwadi yakhe yeenkwenkwezi ebhedini lakhe lokufa (elindele ukuba kuya kubangela ingxabano neCawa yamaKatolika), ecacisa ubungqina bemifanekiso yakhe yehlabathi. Ingqiqo ebalulekileyo eyashukumisa le nguqulelo ekucingeni kwakuyiyo ngcamango yokuba akukho sizathu soqobo sokucinga ukuba uMhlaba uqulethe isikhundla esilungileyo ngaphakathi kwendalo. Olu tshintsho kwiingcinga ziyaziwa njengeCopernican Principle . Umzekelo weCopernicus 'we-heliocentric waba yindume kakhulu kwaye wamukelwa ngokusekelwe kumsebenzi kaTycho Brahe, uGalileo Galilei , noJohannes Kepler , abafumana ubungqina obuninzi bokuxhasa umzekelo weCopernican heliocentric.
NguSir Isaac Isaac Newton owayenako ukuzisa zonke ezi zinto ukufumanisa kunye nokuchaza ngokucacileyo iiplanethi, nangona kunjalo. Wayenokwazi nokuqonda ukuba isichukumiso sezinto eziwela emhlabeni sasifana nesishukumo sezinto ezijikeleza umhlaba (ngokubhekiselele, ezi zinto zihlala ziwela emhlabeni jikelele). Ekubeni le nkqubela yayifanayo, yaqonda ukuba mhlawumbi ibangelwa yinto efanayo, eyayibiza ngokuba yi- gravity .
Ngokuqwalasela ngenyameko nokuphuhliswa kweemathematika ezintsha ezibizwa ngokuba yi- calculus kunye nemithetho yakhe emithathu yokunyuka , uNewton wakwazi ukwenza izilinganiso ezichaze le nkqubela kwiimeko ezahlukeneyo.
Nangona umgaqo kaNewton wobukhulu bokusebenza wawusebenza ekuqikeleleni ukunyuswa kwamazulu, kwakukho ingxaki enye ... kwakungeyona nto icacile ukuba yayisebenza njani. Iingcamango ezicetywayo ukuba izinto zinomtsalane phakathi kwendawo, kodwa uNewton akakwazanga ukuphuhlisa inkcazo yesayensi kwindlela yokwenza umbane osetyenziswayo ukufezekisa oku. Ukuze kucaciswe into engaqondakaliyo, u-Newton uthembele kwisibheno esiphezulu kuThixo - ngokuqinisekileyo, izinto ziziphatha ngale ndlela ekuphenduleni ubukho bukaThixo buphela kwindalo. Ukufumana ingcaciso engokwenyama kuya kulinda ngaphezu kweenkulungwane ezimbini, de kube kufike ingqiqo enokuqonda ukutshabalalisa i-Newton.
I-Cosmology yanamhlanje: Ukudibanisa ngokubanzi kunye ne-Big Bang
Inzululwazi yaseNewton yayinobungqina besayensi ukuya kwekhulu leminyaka ye-20 xa u- Albert Einstein ephucula indlela yakhe yokufunda ngokubanzi , eyayibuyisela ngokucacileyo ukuqonda kwenzululwazi. Kwi-Einstein entsha yokwakhiwa, ukuvutha komdaka kubangelwa ukuguqulwa kwexesha eli-4-dimensional space in response kwizinto ezibonakalayo, njengeplanethi, inkwenkwezi, okanye kwintlanzi.
Enye yeempembelelo ezibangel 'umdla kulo mgaqo omtsha kukuba ikhefu lendawo ayizange lilingane. Ngokwexesha elifutshane, izazinzulu zesazi ukuba ulwalamano oluqhelekileyo luchaze ukuba ixesha lokuchitha ixesha lingaba landa okanye lenze isivumelwano. Kholelwa ukuba u-Einstein wayekholelwa ukuba yonke indalo yayinaphakade, wazisa ukuhlala rhoqo kwimilo yenkcubeko, eyanikezela uxinzelelo oluchasene nokwandiswa okanye ukunqandwa. Nangona kunjalo, xa i-astronomer u-Edwin Hubble ekugqibeleni efumanisa ukuba indalo iyenyuka, uEinstein waqaphela ukuba wayenze iphutha kwaye wasusa i-cosmological constant from theory.
Ukuba yonke indawo iyanda, ngoko isiphetho sokwemvelo kukuba ukuba ubuya kuphinda uhlaziywe yonke indawo, uya kubona ukuba kufuneka ukuba iqalile kwincinci encinci yemeko. Le ngcamango yendlela indalo yaqala ngayo kuthiwa yi- Big Bang Theory. Le nto yayingumbono ophikisanayo phakathi neminyaka emashumi eminyaka ephakathi kwamashumi amabini aneshumi, njengoko yayihlala ilawulwa yiFred Hoyle. Ukufunyanwa kwemisipha ye-microwave yangemvelaphi ye-microwave ngo-1965, nangona kunjalo, yaqinisekisa ubungqina obuye bwenziwe ngokubhekiselele kwingqungquthela enkulu, ngoko yaba yinto yamkeleke kakhulu kwi-physicists.
Nangona ebonakaliswe engalunganga malunga neengcamango zombuso, uHoyle ubizwa ngokuba yizinto eziphambili kwiingcamango ze- stellar nucleosynthesis , eyona ngcamango yokuba i-hydrogen nezinye i-athomu ezikhanyayo ziguqulwa zibe zii-atom ezinzima kwiinqwelo zenyukliya ezibizwa ngeenkwenkwezi, kwaye zichithe kwindalo yonke ekufeni kwenkwenkwezi. Ezi iathom eziyingozi ke ziya kuhamba ngamanzi, amaplanethi, kwaye ekugqibeleni ubomi emhlabeni, kuquka nabantu! Ngaloo ndlela, ngamazwi amaninzi ama-cosmologists amanqabileyo, sonke senziwe sisuka kwi-stardust.
Naluphi na, buyela kwimvelaphi yendalo yonke. Njengoko izazinzulu zafumana ulwazi oluthe xaxa malunga nomhlaba kwaye ziqikelele ngokucokisekileyo i-cosmic microwave yangemvelaphi yemisebe, kwakukho ingxaki. Njengoko imilinganiselo enzulu yathathwe ngedatha yenkwenkwezi, kwacaca ukuba iingcinga ezivela kwi-physics ye-quantum zifuna ukudlala indima ebalulekileyo ekuqondeni izigaba zokuqala kunye nokuziphendukela kwemvelo kwendalo yonke. Le ntsimi ye-cosmology ye-theory, nangona ikhona ingqiqo kakhulu, iye yanda ikhula kwaye idla ngokuba yi-cosum cosmology.
I-Quantum physics ibonise indalo eyayisondele kakhulu ukuba ifaniswe ngamandla kunye nemeko kodwa ayizange ifane ngokupheleleyo. Nangona kunjalo, nayiphi na iinguqu kwizinto zasemhlabeni kwakuye kwanda kakhulu kwiibhiliyoni zeminyaka ukuba indalo yanda ... kwaye ukuguquka kwakuncinci kuncinane. Ngoko i-cosmologists kwafuneka ibone indlela yokuchaza into engafaniyo yendalo yonke, kodwa enye eyayinokuguquguquka okuncinci kakhulu.
Ngenisa u-Alan Guth, i-particic physicist elalijongene nale ngxaki ngo-1980 kunye nophuhliso lwe- theory yokunyuka kwamaxabiso . Ukutshintshwa kwendalo yonke kwintsikelelo yamancinci encinci, kodwa ngokukhawuleza kwanda kwindalo yasekuqaleni ngenxa yexesha elide lokunyuka. Iimbono zeenkwenkwezi kusukela ngo-1980 ziye zaxhasa iziprofeto ze-theory yokunyuka kwamaxabiso kwaye ngoku iimbono ngokuvisisana phakathi kwezinto ezininzi ze-cosmologists.
Iimfihlakalo zeCosmology yanamhlanje
Nangona i-cosmology iye yaqhubeka kakhulu kwikhulu leminyaka elidlulileyo, kusekho iimfihlakalo ezivulekileyo. Enyanisweni, iimfihlakalo ezimbini eziphambili kwi-physics yezinto zanamhlanje ziingxaki eziphambili kwi-cosmology nakwi-astrophysics:
Imiba emnyama - Ezinye iindidi zihamba ngendlela engakwazi ukuchazwa ngokupheleleyo ngokubhekiselele kumlinganiselo wento ebonwayo ngaphakathi kwayo (ebizwa ngokuba "into ebonakalayo"), kodwa into enokucaciswa ukuba kukho into engabonakaliyo ngaphakathi kwinthala. Lo mbandela owongezelelweyo - oqikelelwe ukuthatha malunga nama-25% kwindalo yonke, ngokusekelwe kumlinganiselo osandul 'umva - ubizwa ngokuba ngumnyama. Ukongezelela kwiimbono zeenkwenkwezi, iimvavanyo zomhlaba ezifana ne- Cryogenic Dark Matter Search (i-CDMS) zizama ukujonga ngokucacileyo into emnyama.
Amandla Amnyama - Ngo-1998, izazi zeenkwenkwezi zazama ukufumana isantya apho indalo yayicotha khona ... kodwa bafumanisa ukuba kwakungaphuli. Enyanisweni, izinga lokukhawuleza likhawuleza. Kubonakala ukuba u-Einstein wayehlala efunekayo emva kwezinto zonke, kodwa endaweni yokubamba iphela njengombuso wolingano kubonakala ngathi uqhube iindidi ezihlukeneyo ngokukhawuleza nangokukhawuleza njengoko ixesha liqhubeka. Akungazi ngokuqinisekileyo oko kubangela ukuba "ubukhulu bokudakalisa," kodwa igama elithi physics linike loo nto "amandla omnyama." Ukuqwalaselwa kwezinto zeenkwenkwezi kuqikelela ukuba lo mnyama wamnyama wenza malunga ne-70% yemveliso yendalo yonke.
Kukho ezinye iziphakamiso zokuchazela ezi ziphumo ezingavamile, ezifana ne-Modified Newtonian Dynamics (MOND) kunye nejubane eliguquguqukayo le-cosmology ekhanyayo, kodwa ezi ndlela zithathwa njengeengcamango ezingaphendulwanga phakathi kwamagcisa amaninzi entsimini.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-big bang theory ichaza indlela indalo iguquke ngayo emva nje kokudala kwayo, kodwa ayikwazi ukunika naluphi na ulwazi oluchanekileyo malunga nemvelaphi yendalo yonke.
Oku akuthethi ukuba i-physics ingasitsho nto malunga nemvelaphi yendalo yonke. Xa ama-physics ahlola i-smallest space of space, bafumanisa ukuba i-physum ye-quantum iziphumo ekudaleni iincinci ezibonakalayo, njengoko kuboniswe ngempumelelo yeCasimir . Enyanisweni, i-theory yokunyuka kwamaxabiso iqikelela ukuba ngokungabikho kwanoma yimuphi umbandela okanye amandla, i-spacetime iyanda. Kuthathwe ngobunzima bomntu, ngoko ke, oku kunika inzululwazi ingcaciso ecacileyo malunga nendlela indalo iqala ngayo. Ukuba kwakungekho "yinto" yeyona nto-kungakhathaliseki ukuba yintoni, akukho mandla, ayikho ixesha lokungena kwithuba - kwaye akukho nto yayingayi kuzinza kwaye yayiza kuqala ukuvelisa umcimbi, amandla, kunye nexesha lokunyuka. Le yinkcazo ephambili yeencwadi ezinjenge -Design Grand kunye ne -Universe ukusuka kwiNto , ebonisa ukuba indalo ingachazwa ngaphandle kokubhekiselele kobuqambi obungaphezu kwendalo.
Indima yoBuntu kwiCosmology
Kuza kunzima ukugqithisa ngokugqithiseleyo i-cosmological, ifilosofi, kwaye mhlawumbi nokubaluleka kobuqhetseba bokuqonda ukuba uMhlaba wawungeyona ndawo yezulu. Ngaloo ndlela, i-cosmology enye yeendawo zokuqala ezinikezela ubungqina obungqubuzana nenkcubeko yemveli yenkolo. Enyanisweni, zonke iinkqubela phambili kwi-cosmology ziye zabonakala zinyuka ebusweni beengcamango ezinqwenelekayo esinqwenela ukuzenza malunga nendlela abantu abazikhethekileyo njengezityalo ... ubuncinane ngokwembali yendalo. Le ndinyana evela kwi -Grand Design nguStephen Hawking noLeonard Mlodinow ngokucacileyo ibeka inguqu ekucingeni okuvela kwi-cosmology:
Umzekelo kaNicolaus Copernicus 'wezemvelo wendlela yezilanga zibonakaliswa njengomboniso wokuqala wesayensi ukuba thina bantu asiyiyona nto ephambili yendalo. Ngoku siyabona ukuba umphumo weCopernicus ungomnye wechungechunge lweentsilelo ezidityanisiweyo ezichitha ixesha elide Iingcamango ezibhekiselele kwiimeko ezikhethekileyo zesintu: asikho kwindawo ye-solar system, asikho kwindawo ye-galaxy, asikho kwindawo ephela kwindalo yonke, asikho zenziwe ngama-dark ingredients ezenza ubuninzi bendalo yonke. Ukuchithwa kwezinto ezinjalo ... kubonisa ukuba yiyiphi into izazinzulu ngoku zibiza ngokuba yiCopernican principle: kwisikimu esikhulu sezinto, yonke into esiyaziyo ibonisa abantu abangenalo isikhundla esinelungelo.
Kutheni wonke umntu kufuneka (kwaye anakho) Funda uNeil deGrasse iNcwadi eNtsha yeTyson
Yibamba iqela leHlabathi Solstice
Iintlanzi ezili-10 ezinkulu zeDonna
Wagner's Parsifal: I-Opera Synopsis
Usuku loLingana loBhinqa: Imbali emfutshane
Umthandazo weCawa yakho
Kutheni Izibhamu Zihlaba Abantu?